Waa maxay siyaabaha loo soo jiidan karo dib u habeyn boggagaaga?
Waxaan jeclaan lahaa inaan bilawdo maqaalkan iyada oo gaaban qeexidda gaaban ee loogu talagalay kuwa ku cusub mawduucan. Gadaashu waa gumeysi soo socda oo ka socda hal bog. Sida caadiga ah, isku-xir ayaa lagu geliyey qoraalka waxayna u egtahay qoraalka qoraalka ah. Adiga oo riixaya qoraalkaan, waxaad tagtaa qoraalka sharaxaadda ama bogga oo lagu soo bandhigay mawduucan. Xirfadaha noocan oo kale ah waxay siiyaan dadka isticmaala macluumaadka faa'iido leh waxayna ka caawiyaan milkiilayaasha bogagga inay sare u qaadaan boggooda internetka haddii ay wax walba saxan yihiin.
Qodobkan waxaa loogu talagalay inuu ku baro sida loo helo dib u habeeyn boggagaaga. Waxaan jeclaan lahaa in aan kugula socodsiiyo qalabka aad u baahan tahay si aad u hesho dib-u-celin habboon oo suurtogal ah iyo kordhinta gaadhigaaga.
Dhamaan gadaalba ma aha mid si siman loo abuuray. Taasi waa sababta aad u taxaddareysid marka aad dhiseyso isku xirka boggaaga. Sida caadiga ah, backlinks waxaa loo isticmaalaa labo ujeedo. Midka koowaad waa inuu ka caawiyo websaydhka inuu helo cabitaan tayo sare leh isla markaana kor u qaado awoodda brand-ka ee shabakadda. Midka labaad waa inuu waxyeelo u geysto goobaha tartanka ama aan si ula kac ah u ahayn midkiin.
Sidee loo kala saaraa gadaal tayo sare leh?
Guud ahaan, dib u eegis tayo sare leh waa kuwa ka soo jeeda goobaha ugu fiican. Waxay ku haboon yihiin oo anshax ahaan loo abuuray. Dad badan oo xiriir la leh goobaha tayada ugu wanaagsan, ayaa ka wanaagsan in ay ku jirto liiska raadinta mareegta ee goobta. Google wuxuu arki doonaa xiriirada noocaas ah iyo abaal marin doona bogga ku xiran oo leh darajo sare iyo sumcad wanaagsan. Waa dhab ahaan waxa aad u baahan tahay inaad raadiso dhismaha isku xirka.
Si kastaba ha ahaatee, sida aan horay u soo sheegnay maaha dhammaanba dhabarka loo abuuray si isku mid ah oo ka dibna dhammaantoodba way ka faa'iidaystaan. Taasina waa sababta ay websaydhiyadu u ogaadaan waxa ay ka dhigan tahay tayada sare.
Aynu ku tirinno qaar ka mid ah waxyaabaha asaasiga ah ee dabiiciga ah, tayada sare leh:
oo ku habboon shabakada internetka;
wuxuu ka yimaadaa shabakad isku-kalsooni leh;
wuxuu u dirayaa gaadiidka;
si sax ah loogu dhexgeliyey mawduuca goobta;
looma bixiyo lacag ama udhaxeeya;
mana muuqato wax xayeysiin ah;
waxay kudartaa PageRank Your.
Xidhiidhada noocan oo kale ah ayaa aad u adag in la helo. Taasina waa sababta ay ugu qanacsan yihiin makiinadaha searchers iyo users. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad ka hesho xidhiidhada noocyada kala duwan ee kala duwan, ma aha 100 backlinks oo ka mid ah goobta PR ee goobta sare. Maskaxda ku hay in Google laga yaabo inuu ku ogaado marka aad isku daydo inaad khiyaamayso nidaamka.
Maxay yihiin siyaabaha ugu fudud ee aad dib ugu heli karto boggaaga?
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad fahamto waa dhabarka loo baahan yahay in la dhiso, oo aan la iibsan. Istaraatijiyadda dhismaha ee isku xirnaanta tooska ah waxay ku saleysnaan doontaa shaqo adag, waana intaas oo dhan. Dabcan, waxaad isticmaali doontaa wakhti dheeraad ah oo abuuraya xiriiryo isku mid ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad hubin doontaa xidhiidhada noocan ah inay ku siin doonaan natiijooyin wanaagsan oo aad u dheer.
Si aad u hesho dib-u-habeyn ku habboon, waxaad si fudud u dhigi kartaa magacaaga iyo macluumaadka ku saabsan tayo-sare,. Waxay noqon kartaa inaad bixiso qaar ka mid ah wicitaanadaas. Si kastaba ha noqotee, ka hor inta aanad dejin adeegyadda dhismaha ee kasta, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaanay ahayn shabakadda spammy.
Farsamooyinka kale ee farsamada xidhiidhinta waa inay noqdaan barta martida. La shaqee shabakada internetka ee la xariira ee la isku haleynayo oo daabacana qaar ka mid ah jibbaarada xiisaha leh iyo soo jiidashada leh xiriiro soo galaya oo tilmaamaya goobtaada Source .